ယူကရိန်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအားလုံးကို ကြိုဆို - Xinhua News Agency
ရုရှား-ယူကရိန်း စစ်ရေးပဋိပက္ခ စတင်ဖြစ်ပွားပြီး ပဋိပက္ခအား ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရေးအတွက် ဦးတည်ထားသော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ချိန်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကို တညီတညွတ်တည်း အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အား အချိန် ၁၀ ပတ်ကျော်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။လုံခြုံရေးကောင်စီက ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် “အလွန်စိုးရိမ်မိကြောင်း” နှင့် ပဋိပက္ခအား ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာရန် အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
မာရီယူပိုးလ်မြို့ရှိ Azovstal စက်ရုံနှင့် အနီးဝန်းကျင်မှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူများက Donetsk ၊ Bezimenne ကျေးရွာရှိ ယာယီနေရာစင်တာသို့ မေ ၁ ရက်က ရောက်ရှိလာစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ကမ္ဘာကြီးအနေနဲ့ လက်နက်များ ချုပ်ငြိမ်းဖို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ တန်ဖိုးများကို စောင့်ထိန်းဖို့ အတူတကွလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်” ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားလျက် ကောင်စီက “ယူကရိန်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လေသံတစ်ခုတည်း ပြောကြားထားသည့်” ထုတ်ပြန်ချက်အား ကုလသမဂ္ဂ အကြီးအကဲ ဂူတာရက်စ်က မေ ၇ ရက်တွင် ပြောခဲ့သည်။
Donbass တွင် စစ်ကားတစ်စီးကို သစ်ကိုင်းများဖြင့် ဖုံးအုပ်နေသော ယူကရိန်းစစ်သားတစ်ဦးအား ဧပြီ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ယူကရိန်း အကျပ်အတည်းသည် ဥရောပတစ်ခွင်အား ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခများက ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကမူ မဆုတ်သာမနစ်သာ အခြေအနေတွင်ရှိနေသဖြင့် ပဋိပက္ခ ချဲ့ကားမှုနှင့် ရှည်ကြာမှု၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေအနေဆိုးမှာ သိသိသာသာထင်ရှားပေါ်လွင်လာခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုက ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ယူမှုရှိသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်ကို အားကောင်းသောသတင်းစကားပါးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခများ ငြိမ်းချမ်းစွာအဖြေရှာခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် အခြေခံကျ၍ ကာလရှည် အကျိုးစီးပွားများအတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မည်ကဲ့သို့သောတည်ငြိမ်သောစိတ်ထားမဆို တင်းမာမှုများကို အရှိန်လျှော့ချရန်နှင့် အရေးပေါ်လိုအပ်လျက်ရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ပြောကြားနိုင်သော်လည်း အမေရိကန်ဦးဆောင်သော စစ်မဟာမိတ်များအဖြစ် နေတိုး (NATO) အဖွဲ့ကမူ လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်များအတွင်း အွန်လိုင်း (online) ရော အော့ဖ်လိုင်း (offline) ပါ မီးလောင်ရာလေပင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
အော့ဖ်လိုင်း (offline) အနေဖြင့် အဆိုပါနိုင်ငံများအုပ်စုက ရုရှားနိုင်ငံအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ထားသလို ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ လက်နက်များ သိသိသာသာတင်ပို့ခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း (online) ဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့်မူ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းမှုကမ်ပိန်း၊ အကြောက်တရားထုတ်လုပ်မှု၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်၌ အသံများမပေးပို့နိုင်ရန် တားမြစ်ခြင်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများကိုလည်း လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရန် ဖိအားပေးခြင်းများ လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ လက်နက်များတင်ပို့ခြင်းမှာ လျော့ကျသွားခြင်းမရှိဘဲ တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းကပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ ကျော်တန်ဖိုးရှိသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမေရိကန် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က မေ ၆ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော ထပ်တိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ တန် လက်နက်ပက်ကေ့ချ် (package) ကိုလည်း အားဖြည့်ပေးပို့ခဲ့သည်။
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် “ကုလသမဂ္ဂ ပဋိပညာဉ်၊ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းလမ်းများဖြင့် နိုင်ငံတကာအငြင်းပွားမှုများ အဖြေရှာရေး တာဝန်ဝတ္တရားအောက်တွင်” တာဝန်ယူသင့်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ထုတ်ပြန်ချက်က ထောက်ပြထားသည်။
အဖွဲ့အစည်းတည်ထောင်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်အကြာမှစ၍ ကုလသမဂ္ဂသည် အားလုံးပါဝင်မှုအရှိဆုံး၊ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအရှိဆုံး အစိုးရအချင်းချင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သလို အမျိုးမျိုးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို စုပေါင်းတုံ့ပြန်ရန် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ထိရောက်မှုရှိသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
မြင့်တက်လျက်ရှိသော မတည်ငြိမ်သည့် နိုင်ငံတကာအခြေအနေက ကုလသမဂ္ဂ၏ တန်ဖိုးနှင့် အခန်းကဏ္ဍနှင့် ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာနှင့် အဆင့်အတန်းကို အခိုင်အမာစောင့်ထိန်းရန် လိုအပ်ကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တရုတ်နိုင်ငံသည် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကို အမြဲတစေပံ့ပိုးနေသလို ကြိုဆိုလျက်ရှိသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်၏ အခြေခံမူများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ခွဲခြား၍မရသော လုံခြုံရေးမူကို စောင့်ထိန်းလျက်ရှိကြောင်းနှင့် သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှုစိတ်ဓာတ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမြှင့်တင်ရန် ကြိုးစားခြင်းနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တာဝန်ယူမှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် တင်းမာမှုကိုလျှော့ချရန် အပြုသဘောဆောင်သော လုပ်ဆောင်မှုများစွာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ မပျက်မကွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပဋိပက္ခအဖြေရှာခြင်းဆိုင်ရာ “လိုအပ်ချက် ၄ ရပ်” ၊ ယူကရိန်းအရေးဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက် ၅ ရပ်နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ လျော့ပါးရေး ဆောင်ရွက်ချက် ၆ ချက် စသည့် အဆိုပြုချက်များဖြင့် အကြံဉာဏ် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
#UN, #China, #Peacebuilding, #Ukraine, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #ကုလသမဂ္ဂ, #တရုတ်, #ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု, #ယူကရိန်း, #ဆင်ဟွာ, #မြန်မာ, #ဆင်ဟွာမြန်မာ
Xinhua Commentary: All peacebuilding efforts on Ukraine are welcome
BEIJING, May 8 (Xinhua) — The United Nations Security Council on Friday unanimously adopted its first statement on Ukraine since the start of Russia-Ukraine military conflict inabid to rally efforts towardapeaceful settlement of the crisis, which has dragged on for more than 10 weeks.
Inapresidential statement, the council expressed “deep concern” over the maintenance of peace and security in Ukraine and voiced support for Secretary-General Antonio Guterres’ efforts to findapeaceful solution to the crisis.
Also on Friday, Guterres, the UN chief, welcomed the statement in which the council “spoke with one voice for peace in Ukraine,” reiterating that “the world must come together to silence the guns and uphold the values of the UN Charter.”
The Ukraine crisis has sent shockwaves beyond Europe, corroding world peace, stability and economic recovery. As the conflict grinds on and negotiation gets deadlocked, it has become increasingly apparent that the global fallout ofamagnified or prolonged conflict can be immense.
The UN’s latest effort representedagrowing appeal of the international community for peace. It also sentastrong message that dialogue and negotiation is the responsible way to maintain peace and stability andapeaceful settlement of conflicts is the right choice that serves the fundamental and long-term interests of the whole world.
Any sober mind can tell that efforts to de-escalate tensions and promote peace talks are urgently needed, but not NATO as the U.S.-led military alliance has been fanning the flame offline and online over the past weeks.
Offline, the bloc has issued sweeping sanctions against Russia and incessantly shipped weapons to Ukraine; online, it launchedaworldwide disinformation campaign, manufacturing fear, blocking dissenting voices on social media and pressuring countries to take sides.
Up to now, arms deliveries to Ukraine are not decreasing, but increasing. The United States alone has already sent more than3billion dollars worth of military products there and is set to bolster its delivery with an additional 150-million-dollar weapons package, signed by U.S. President Joe Biden on Friday.
As the UN Security Council’s presidential statement pointed out, all member states should undertake, “under the Charter of the United Nations, the obligation to settle their international disputes by peaceful means.”
Since its founding more than 70 years ago, the United Nations has been the most universal, representative and authoritative intergovernmental international organization, providing an effective platform for the international community to respond collectively to various threats and challenges.
An increasingly volatile international climate highlights more than ever the value and role of the UN, and the necessity to firmly uphold its authority and status.
Asapermanent member of the UN Security Council, China always supports and welcomes all efforts conducive to peace. Since the onset of the crisis, China has upheld the purposes and principles of the UN Charter and the principle of the indivisibility of security and acted responsibly for regional and world peace by striving to promote peace talks and actively participating in humanitarian assistance in the spirit of equity and justice.
China has made unremitting efforts for peace withaslew of concrete actions to ease tensions. China has also contributed its wisdom with such proposals as the “four musts” on resolving the crisis,afive-point position on the Ukraine issue andasix-point initiative on easing the humanitarian crisis.■
Photo 1 : United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks duringameeting of the UN Security Council on the situation in Ukraine at the UN headquarters in New York May 5, 2022. (Xinhua/Xie E)
Photo2: People evacuated from the Azovstal plant and adjacent houses in Mariupol arrive atatemporary accommodation center in the village of Bezimenne in Donetsk, May 1, 2022. (Photo by Victor/Xinhua)
Photo3: A Ukrainian soldier covers an armored vehicle with branches in Donbass on April 12, 2022. (Photo by Diego Herrera/Xinhua)